Bit By Bit - Kubvunza mibvunzo - 3.6 Ongororo dzinobatanidzwa kune makuru makuru emvura
Kubatanidza kutsvakurudza kune makuru makuru ezvinyorwa kunokugonesa kubudisa mafungiro asingazogoneki nedzimwe ruzivo ruzivo pachavo.
Kazhinji tsvakurudzo dzakamira-dzoga, dzinozvidzivirira. Havana kuvaka kune mumwe nemumwe, uye havashandise pane imwe yese dheyo iripo munyika. Izvi zvichachinja. Pane zvakawanda zvinogona kuwanikwa kuburikidza nekubatanidza dheta rekutsvaga kumakuru makuru ezvinyorwa zvinokurukurwa muchitsauko 2. Nokubatanidza idzi mbiri dzemhando, zvinowanzoita kuita chimwe chinhu chakanga chisingaiti kana mumwe chete.
Kune nzira mbiri dzakasiyana-siyana umo ruzivo rwekutsvaga runogona kusanganiswa nehukuru hwemashoko. Muchikamu chino, ndicharondedzera nzira mbiri dzinobatsira uye dzakasiyana, uye ndichavaidza kuti dzive dzakakosha kubvunza nekuwedzera kukumbira (Mufananidzo 3.12). Kunyange zvazvo ndichienda kunoratidzira nzira imwe neimwe nemuenzaniso wakajeka, unofanira kuziva kuti izvi ndezvipfeko zvekare zvinogona kushandiswa nemhando dzakasiyana dzekutsvaga deta uye marudzi akasiyana ehurukuro. Uyezve, iwe unofanira kuona kuti umwe neumwe wemuenzaniso uyu unogona kuonekwa nenzira mbiri dzakasiyana. Kufunga nezvezve pfungwa dziri muchitsauko 1, vamwe vanhu vachaona zvidzidzo izvi semuenzaniso we "kuchengetedzwa" nhamba yekutsvakurudza dhesi inosimudzira "readymade" huru data, uye vamwe vachavaona semuenzaniso we "readymade" makuru makuru ekusimudzira "sarudzo" yekuongorora deta. Unofanirwa kuona maonero maviri. Pakupedzisira, iwe unofanirwa kuona kuti mienzaniso iyi inotsanangurira sei kuongororwa uye makuru makuru ezvinyorwa zvinopera uye kwete vatsigiri.
Mufananidzo 3.12: Nzira mbiri dzekubatanidza nheyo huru dzekutsvaga uye nhamba yekuongorora. Mukugadziriswa kubvunza (chikamu 3.6.1), guru rine dhiyabhorosi rine chinyorwa chekufarira uye inotsvakurudza dhesi inovaka mamiriro anodiwa akaipoteredza. Mukukudziridza kukumbira (chikamu 3.6.2), guru guru dhiyabhorosi harina chiyero chekufarira, asi rinoshandiswa kusimbisa dheta rekuongorora.